Antso fanairana sa fanambaniana? Mampizarazara hevitra ny Tiorka ny dokambarotra momba ny salakam-behivavy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Novambra 2019 6:11 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Italiano, Français, Esperanto , Español, Shqip, عربي, English
Pikantsary avy amin'ny dokambarotra servietam-behivavy (salaka) izay niteraka adihevitra tany Torkia.
Namoaka lahatsary dokambarotra sahisahy ny marika salakam-behivavy iray malaza any Torkia ary nanao izany ho toy ny fanentanana hiadiana amin'ny famonoana vehivavy sy ny fady ara-tsosialy mifandraika amin'ny [fadimbolana]. Na izany aza, voaporofo fa mampisara-bazana ilay lahatsary, ka tsy maintsy namoaka fialan-tsiny ny orinasa ary nanaisotra izany satria raisin'ny sasany ho toy ny fanafihana ny lazan'i Torkia any ivelany izany.
Navoakan'ny orinasa Amerikana Procter&Gamble, tamin'ny marikany eo an-toerana Orkid, mpivarotra salakam-behivavy malaza any Torkia tamin'ny faran'ny volana Oktobra 2019 ilay dokambarotra, antsoina hoe Manaisotra ny Henatra, na ‘Utanç Paketleri’ amin'ny teny Tiorka.
Ilay horonan-tsary sahabo ho iray minitra sy sasany dia manomboka amin'ny feo iray milaza hoe “Fonosina anaty gazety ny salakam-behivavy any Torkia rehefa mividy azy noho ny fanilikilihana ny fadimbolana. Ao anaty fiarahamonina iray ahitana vaovao feno herisetra, fanavakavahana sy ny tsy rariny mianjady amin’ ny vehivavy, dia tsy mahamenatra ny mivarotra salakam-behivavy”.
Hita avy eo ny fonosana salakam-behivavy napetraka tanaty gazety. Avy eo nifindra tany amin'ny gazety pirinty ny tantara izay natao pirinty ny gazety iray mamerina imbetsaka ny hafatra manambara zava-misy lehibe momba ny fanamby atrehin'ireo vehivavy any Torkia, toy ny taha ambany amin'ny asa sy ny fahavitsian'isa solontena amin'ny politika, ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy ary ny tsy fahampian'ny fahaizana mamaky teny sy manoratra. Niafara tamin'ny fampisehoana ny fonosana, nofonosina tao anatin'ilay gazety natao pirinty hita eo amin'ireo talantalan'ny tranombarotra, ary misy hafatra farany milaza hoe: ” lafo mandritra ny telo andro ny fonosanay” ilay lahatsary.
Nahazo loka noho ny fahaiza-mamorona ilay lahatsary nandritra ny Fetibe Iraisam-pirenena Golden Drum faha-26 momba ny Famoronana tany Slovenia tamin'ny Oktobra 2019. Avy eo dia nanomboka nivezivezy tao amin'ny media sosialy Tiorka, anisan'izany ny tao amin'ny kaonty Twitter-n'ny orinasa.
Avy hatrany dia niteraka adihevitra mafana nampizarazara ny olona tamin'ny fandikana ny hafatra izany. Raha misy ireo mankasitraka sy manohana izany, ny hafa kosa nanana fanehoan-kevitra amin'ny lafiny ratsy, mamaky azy ho ‘manala baraka an'i Torkia’ ary mitaky ny hanaovana ankivy ilay marika.
Tehamaina eo amin'ny tarehy
Milaza ireo izay manohana ilay votoaty fa tena milaza ny marina ilay lahatsary. Mpiserasera sasany mampiasa ny teny “tehamaina” rehefa mamaritra izany:
“Dokambarotra mamely tehamaina anao eo amin'ny tavanao izany satria miezaka manazava izy fa ny toe-tsaina mitondra henatra amin'ny fivarotana salakam-behivavy dia mitovy amin'ireo tsy menatra amin'ny heloka bevava mihatra amin'ny vehivavy.
Feyza Altun, mpisolovava sy mpiaro vehivavy malaza nanamarika fa:
Oroka amin'ny vodihena ilay dokambarotra Orkid, ho setrin'ny famonosana ny salakam-behivavy amin'ny gazety ho toy ny zavatra mahamenatra na afenina. Nanonta vaovao momba ireo heloka bevava mianjady amin'ny vehivavy any Torkia ilay [marika] ary nampiasa izany (gazety) ho toy ny fonosana
Angamba voafintin'ilay mpiserasera Nisa tsara toy izany ny lohahevitra:
Raha tsy mahazo tsara ny hafatra ao amin'ny dokambarotra #Orkid, ary mieritreritra hoe “Inona no tianao holazaina, natao tsinontsinona ny vehivavy Tiorka?”, Tiako mba hahafantatra isika fa ny zavatra tsy mendrika dia ireo vaovao ao anatin'ireo gazety ireo.
Antso hanao ankivy ilay marika
Milaza ireo izay mandà mafy ilay doka fa manala baraka an'i Tiorkia sy ny vehivaviny ilay dokambarotra, ary manaparitaka lainga mba handokoana an'i Tiorkia ho toy ny firenena taraiky, mpandala ny nentin-drazana ary fanatika. Ohatra, mpiserasera iray manoratra ao amin'ny Twitter hoe:
Manala baraka an'i Torkia noho ny famonosana salakam-behivavy tamin'ny gazety ny [Orkid]. Mandritra izany fotoana izany dia misy ny sasany milaza fa dokambarotra mahavariana izany. Firy aminareo marina no mividy salaka fonosina anaty gazety? Tsy mahamenatra izany @orkid! Tsy azo ekena ny mampiseho ny firenentsika ho toy ny mihemotra #orkid
Mpiserasera iray hafa manondro ireo vahiny izay mikasa hanamaivana ny voninahitry ny tafika any Torkia satria ireo no ao ambadiky ny hevitr'ity dokambarotra ity:
“Orkid, raha nanao an'io dokambarotra io 10 taona lasa ianao, dia mety ho marina izany, saingy fantatrao tsara izao fa tsy misy zavatra toy izany intsony! Andeha jerena ny anton'ity dokambarotra ity? Milalao ny anjarany ny renivola Zionista ho toy famaliana ny hetsika mahery vaika, Hetsika Fandriampahalemana Lohataona ataontsika.
Fialan-tsiny avy amin'ilay marika
Taorian'ny fitomboan'ny antso hanao ankivy ny marika tao amin'ny media sosialy, nesorin'ny Orkid tao amin'ny kaontiny ofisialy ilay lahatsary ary nanao fanambarana izay navoakan'ny gazety Tiorka ihany koa izy:
After calls to boycott the brand increased in social media, Orkid removed the video from its official account and made a statement that was also covered by Turkish newspapers:
“Türkiye’de Orkid markası için tasarlanan mağaza içi kampanyası, Türkiye’de ve dünyada kadınların yaşadığı damgalanma, ekonomik kısıtlar nedeniyle hijyenik pede erişememe ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet de dahil olmak üzere bazı ciddi sorunlara ışık tutmak amacını taşıyordu. Bu sorunlar nadiren tartışılıyor, genellikle utanç duygusuna dönüşüyor ve genç kızlar, kadınlar ve aileleri için hayat boyu karşı karşıya kalacakları konuları oluşturuyor. Fikrin uygulanmasında niyetimizi tam olarak yansıtamadığımızı görüyoruz ve herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep olduysa bundan dolayı da üzgünüz.
Ny dokambarotra nataon'ny marika Orkid tany Torkia dia natao hanehoana ny tsy fahampian'ny fahazoana salakam-behivavy noho ny sakana ara-toekarena, sy ny herisetra ateraky ny tsy fitovian'ny lahy sy ny vavy. Zara-raha resahana izany olana izany, ary matetika mivadika ho loharanon'ny henatra, ka mahatonga olana hatrany ho an'ny tovovavy, ny vehivavy sy ny fianakavian'izy ireo. Mahita isika fa tsy afaka mandinika tanteraka ny fikasantsika hanatanteraka ny hevitra, ary miala tsiny isika rehefa miteraka tsy fifankahazoana izany.”
Satria monina ao an-tanàndehibe ankehitriny ny telo ampahaefatry ny mponin'i Torkia, dia vitsy ankehitriny ny vehivavy mila manafina ny salakany amin'ny gazety na harona plastika rehefa mividy izany, izay tena ilaina indrindra raha lehilahy no olona eo amin'ny fivarotana. Azo antoka fa izany no zava-misy any amin'ireo tanàna lavitra saro-dalana. Na izany aza, dia mbola manjaka manerana ny fiarahamonina Tiorka ny faznilikilihana, izany no antony mahatonga ny fandaharam-pianarana any an-tsekoly tsy manome fampianarana mihitsy na fampahalalana momba ny lahy sy vavy sy ny ara-pananahana. Tsy tsara ihany koa ny zava-misy any amin'ny lisea: tamin'ny volana Febroary 2019, nandà ny fitovian'ny lahy sy ny vavy tamin'ny fanesorana ny taratasy fanamarinana ny fihetsika mitovy eo amin'ny lahy sy vavy ny rafi-pampianarana lisea Tiorka.
Araka ny filazan'ny fikambanana Tiorka We Will Stop Femicide Platform, zava-misy isan'andro ny famonoana vehivavy: tamin'ny volana Oktobra fotsiny ohatra, dia vehivavy 36 no maty novonoin'ny lehilahy
Namoaka ny tatitray Oktobra 2019 izahay.
Tao anatin'ny 31 andro, vehivavy 36 no maty novonoin'ny lehilahy. Mitranga hatrany ny herisetra sy ny fanararaotana ankizy.